Tantara · Avrily, 2019 · Global Voices teny Malagasy
Tantara · Avrily, 2019
Tantara mikasika ny Tantara tamin'ny Avrily, 2019
Hanonta hajia fahatsiarovana ny fandripahana ny Armeniana i Libanona
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana26 Avrily 2019
Hanamboatra hajia ho fahatsiarovana ny fandripahana ny Armeniana ny paositra Libaney. Nanasongadina ny maha zava-dehibe ny marika amin' izany hajia izany ny fanambaran'ny minisitry ny fifandraisan-davitra, Nicolas Sehnaoui tao amin'ny Twitter.
Eoropa Afovoany & Atsinanana22 Avrily 2019
Azia Atsimo21 Avrily 2019
‘Nofy Tsy Mifanaraka: Politikan'ny Tanàna': Manaitra Momba ireo Olana Sosialy Ao Nepal Ny Kanto
Azia Atsimo10 Avrily 2019
Nandritra ny an-jato taona maro, ny fitantaràna mahazatra an'i Nepal dia nanavaka an'ireo tantara sy ireo zavatra niainan'ireo vondrom-piarahamonina marobe natao ankilabao, niangaran'ny vintana ary indizeny. Sarihan'ireny fampirantiana ireny ny saina ho amin'ireo an-tanan-tohatra ara-tsosialy fototr'olana sy ireo dindo iraisam-pirenena manjakazaka.
Amerika Latina04 Avrily 2019
Isaky ny 17 Desambra, Mankalaza ny fitsingerenan'ny nahafatesany ny firenena rehetra izay mihevitra an'i Símon Bolívar ho toy ny maheron'ny fireneny. Saingy tamin'ny volana Desambra 2007 lasa teo, takona ny fahatsiarovana ny tsingerintaona raha nanomboka nanahy ny tamin'ny nahafatesan'i Bolívar ny filoha Hugo Chávez, izay noheveriny fa voan'ny raboka .
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana01 Avrily 2019